Lovely Bhimad - Articals
तपाईं अहिले यो IP बाट भिजिट गर्दै हुनु हुन्छ›
"मेरो छोरा दुर्व्यसनी होइन" भन्दै नढाँट्नुहोस्
मैले नार्कोनन्मा उपचारमा ल्याइएका एक विद्यार्थीका मुमालाई देखें जो आफ्नो छोरा लागु औषधको दुर्व्यसनमा नराम्रोसंग फसिसकेको छ भन्ने कुरा विश्वासै गर्न नै तयार हुनुहुन्थेन । वहाँको सँधै भनाई हुन्थ्यो मेरो छोरा अरु जस्तो होइन । बार बार विभिन्न कोणबाट सम्झाउँदा पनि वहाँ आफ्नो छोरो दुर्व्यसनी भएको मान्न तयारनै हुनुहुन्थेन । कुनै दिन छोराले चोर्ने, तोडफोड गर्ने गरेर दुःख दिँदा भने वहाँ छोरालाई उपचार केन्द्रमा राखीदिन अनुरोध गर्नुहुन्थ्यो । तर केहि दिनमै फेरी अब छोरा राम्रो भयो त्यसैले कलेज पठाउँछु भनि डिस्चार्ज पनि गर्राई हाल्नुहुन्थ्यो । त्यो बच्चा पर्ढाईको नाममा बाहिर जाने वित्तिकै पुन ड्रग्समा फस्न पुग्थ्यो । फेरी समस्या परेपछि ती आमा हामी कहाँ आउनुहुन्थ्यो । आजीत भएर हामीहरुले पनि त्यो बच्चालाई भर्ना गर्नै छोडिदियौं । त्यसपछि हामीले थाहापायौं की त्यो केटोले लागु औषधको बेचबिखन पनि गर्न थालेछ । यो कुरा थाहा पाएपछि त्यसको जानकारी हामीले आमालाई गराउँदा वहाँले पुन स्विकार गर्नुभएन । हेर्दा हेर्दै त्यो केटो प्रहरी कारवाहीमा परि जेलमा पर्न पुगे । त्यस्तै अर्की आमा थिइन् जो छोरालाई नार्कोनन् उपचार केन्द्रमा सँधै भेट्न आउने गर्दथिन् । आमाको मायाको कमजोडीको फाईदा उठार्ई त्यो केटो दबाब दिएर नार्कोनन्बाट डिस्चार्ज गरी घर जान सफल भयो । डिस्चार्ज भएको केही समय पछि उसलाई आमाले स्विजरलैण्डमा होटल मैनेजमेन्ट पढ्न पठार्ईन जहाँ त्यो केटाको ओभरडोज भएर मृत्यु भयो । मैले आफ्नै आँखाले देखेका यस्ता कैयौं घट्नाहरु छन्, कथाहरु छन् जहाँ आमा बाबुले मेरो छोरा वा छोरी दुर्व्यसनमा परेका छैनन् भनि जिद्दी गर्नाले छोरा छोरी मृत्युबरण गर्न बाध्य भएका छन् ।
सामान्यतया के देखिन्छ भने ड्रग्सको समस्या विगत १५ वर्षदेखि अलि धेरै मात्रामा आएको हो । त्यसभन्दा पहिले यो समस्या यस परिणाममा थिएन । जब कुनै घरका छोरा छोरीले ड्रग्स लिन थाल्दछन् तब त्यस व्यक्तिको स्वास्थ, पर्ढाई र व्यवहारमा आएको परिवर्तन र गिरावट त आमाबाबुले देख्छन् तर ड्रग्सलेनै यो समस्या ल्याएको हो भन्ने चाँही थाहा पाउन सक्तैनन् । यहिँबाट आमा बाबुबाट गल्ती हुन थाल्छ । त्यस्तो समयमा पर्ई, व्यवसाय, काम रोक्नु पर्छ, सवारी साधन चलाउन रोक्नु पर्छ, मोबाइल फोन प्रयोग गर्न रोक्नु पर्छ, पैसा बोक्न दिन रोक्नु पर्छ तर नजानेर आमा बाबुले झनै तिनै चिज प्राप्त गर्न मद्दत गरी दिई रहेका हुन्छन् । जब ड्रग्स लिएको देख्छन्, सुन्छन् वा शंखा गर्छन त्यस अवस्थामा पुगुञ्जेल ती छोरा छोरीले झण्डै डेढ वर्षलागु औषध लिई सकेका हुन सक्छन् । शंखा हुनेवित्तिकै उपचार केन्द्रमा आमाबाबु गएर सल्लाह गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो तर धेरै आमा बाबुले यो कुरा लुकाउन थाल्दछन् र झन् झन् गल्ती गर्दै छोरा छोरीलाई समस्यामा पार्दछन् । अनेकौं प्रयास गर्दा पनि छोरा छोरीले लागु औषध छा्ड्न नसकेको देख्दा देख्दै पनि, उनीहरु क्षति, आँसु, पिडा, रोग बोक्दै अझै त्यो कुरा घर भित्रै लुकाउँदै जान्छन् । यसो गर्दा त्यो केटो लिभरको रोग, अल्सरको रोग, टि.वि., ड्रि्रेस्न जस्ता रोगको पनि शिकार हुन पुग्छ । सके कडा दुर्घट्नामा परि अङ्ग भङ्गमा पनि पर्न सक्छ वा यहि विच मर्न पनि सक्छ । जब हरेक दिन पैसाको आवश्यक परी त्यो केटोले घरमा चोर्ने, तोडफोड गर्ने र आमा बाबुलाई धम्काउने गर्न थाल्दछ त्यसपछि आत्तिदै आमा बाबुले उपचारकेन्द्र खोज्न सक्छन् तर कोही कोही आमाहरु यस्तो अवस्थामा पुग्दा पनि मेरो छोरा अरु जस्तो होइन भन्दै उल्टै सत्य कुरा सुनाउनेहरुलाई नै दुश्मन देख्ने गर्दछन् । यस्ता आमाहरुले खुबै दुःख व्यहोर्न बाध्य हुनुपर्छ । त्यसैले म सम्पूर्ण अभिभावकहरु जसका छोरा छोरी कक्षा ६ देखि १०±२ सम्म पढ्छन् तिनीहरु दुब्लाउँदै गएका छन्, पर्ढाईमा कम नम्बर ल्याउने वा फेल हुने वा गएल पर्ने गरी रहेका छन्, व्यवहार र चरित्रमा परिवर्तन छ, परीवारसंग बोल्न घुलमिल गर्न कमी आई रहेको छ र रातमा नसुत्ने विहान अवेर सम्म सुतिरहने गरी रहेका छन् भने ड्रग्स लिएको शंखा गरी विशेषज्ञसंग परामर्श लिन ढिला गर्नु हुँदैन भनि सल्लाह दिन चहान्छु । पिसाब परिक्षण गरी यो कुरा १५ सेकेण्डमै थाहा पाउन सकिन्छ । जब ड्रग्स लिएको देखिन्छ, भेटिन्छ वा पिसाब परिक्षणबाट प्रमाणित हुन्छ वा त्यस केटा वा केटीमा शारीरिक, चारीत्रिक र अध्ययन वा व्यवसायमा आएको परिवर्तन र गिरावटबाट प्रमाणित हुन्छ तब त्यस व्यक्तिले जे भने पनि आमा बाबुले आफ्ना छोरा छोरी दुर्व्यसनी भैसकेको छ भनेर नै मान्नु पर्दछ । फेल हुने, दुब्लाउने, चरीत्रमा परिवर्तन आउने स्थिति एक दुर्इ पटक ड्रग्स लिदैमा आउँदैन । यो स्थितिमा व्यक्ति आई पुग्दा त्यस व्यक्तिले थुप्रै ड्रग्स लिई सकेको हुन्छ ।
यो कुरा धेरै आमाहरुले बुझ्दैनन र मेरो छोरा वा छोरीले गाँजा मात्र लिएको हो ब्राउनसुगर त खाएको छैन, वा ब्राउनसुगर मात्र खाएको हो तर सुर्इ लिएको छैन वा कहिले काहीँमात्र खाने केटा हो दुर्व्यसनी भै सकेको छैन भन्ने विश्वास राख्दै छोरा छोरीलाई बचाउ गर्दछन् वा त्यो समस्या घरभित्रनै दबाउँछन् । यहि गल्तीले त्यो घरको विनास हुन पुग्छ र त्यो दुर्व्यसनमा परेको छोरा छोरीको मृत्यु हुन पुग्छ । आमाबाबुहरुपनि रोगी हुन पुग्छन् ।
त्यसैले मेरो यहि अनुरोध छ की जब व्यक्ति दुब्लाउँछ, आफ्ना व्यवसायमा असफल हुन थाल्छ, चरीत्रमा परिवर्तन हुन्छ, निन्द्रामा समस्या आउँछ तब लागु औषध लिएको शंखा गर्नुहोस् र लागु औषध लिएको कुरा प्रमाणित भएमा त्यस व्यक्तिलाई अरु जस्तो विग्रिएको होइन भन्दै ढाकछोप गर्ने काम विल्कुलै नगर्नुहोस् । लागु औषध लिने भनेकै विग्रिएको वा विग्रिने बाटो तिर लागेको प्रमाण हो । जसरी चोर अति विग्रिएको र कम विग्रिएको हुन सक्तैन त्यसै गरी लागु औषध लिनेहरु पनि धेरै विग्रिएको र कम विग्रिएको हुन सक्तैनन् । दुब्लाउँदै गएको छ, पर्ढाई व्यवसायमा असफल भै रहेछ, निन्द्रामा समस्या छ र मौलिक चरित्रमा फरकपन आईरहेको छ भने विश्वास गरीहाल्नुहोस् तपाईका छोरा छोरी ड्रग्सको गम्भिर समस्यामा परि सकेका छन् । त्यस्ता छोरा छोरीको ढाकछोप गर्दै "मेरो छोरा वा छोरी अरु जस्तो होइन भन्दै" गल्ती गर्ने काम नगर्नु होस् । नत्र तपाईले लुकाएकै कराण त्यस व्यक्तिको कलिलै उमेरमा ज्यान जानेछ । लागुऔषध लिन्छ भन्ने प्रमाणित भएपछि त्यो व्यक्ति दुर्व्यसनको गम्भिर समस्यामा परिसकेको छ भनेर नै विश्वास गर्दा राम्रो हुन्छ । मेरो छोरा अरु जस्तो होइन भन्ने भ्रम पालेर नबस्नुहोस् किनकी तपाईले लागु औषधमा विग्रिएका भनेको कसलाई भन्ने भन्नेकुरा अध्ययन गर्नु भएको छैन । यो विशेषज्ञहरुको काम हो । आमाबाबुले विशेषज्ञ बन्ने काम गर्नु हुँदैन । "मेरो छोरा दुर्व्यसनी होइन" भन्दै नढाँट्नुहोस्
लेखक : वसन्तराज कुँवर
छोरा कि छोरी: नारी निर्दोष छन्
छोरी पराइको घर जान्छे र अन्तै फक्रन पुग्छे भन्ने हाम्रो सामाजिक मान्यताले गर्दा प्रत्येक दम्पतिले कमसेकम एक जाना छोरा त होस भन्ने प्रबल ईच्छा राखेको हुन्छ। आर्थिक एंव सामाजिक कारणले गर्दा धेरै सन्तान जन्माउन नचाहाने आधुनिक दम्पतिहरु पनि छोराको आशले दोस्रो सन्तान जन्माउने प्रयास गर्दछन्। साविकै दोहोरिएर छोरी जन्मियो भने त्यसको दोष महिलालाई थोपर्ने र हर्को वोवाह गर्ने तरकरमा लोग्ने पुरुष परिवारहरु अहिले पनि थुपर्रै छन्। गाउँघरमा त यो चलनले जरा नै गाडेको छ। सात-आठ छोरी जन्माएर नैरास्यको भुमरिमा पर्ने नारीहरु पनि कम छैनन्। तर प्राकृतिक वैज्ञानिक यथार्थ के हो भने महिलाको गर्भबाट छोरा वा छोरी जन्मिने भन्ने कुराको निर्धारण पुरुषको विर्यमा हुने शुक्रकिटको स्वरुपले गर्छ, महिलाले गर्न सक्दिनन्। महिलाको डिम्बमा छोरा कि छोरी निर्धारण गर्ने शत्ति नै हुदैन्।
मानव शरिरको संरचनाभित्र प्रत्येक जिवकोषमा जीवाणुका बिभिन्न पुञ्ज बोकेका क्रोमोजोम हुन्छन, जसलाई सुस्मदर्शक यन्त्रबाट हेर्न र गन्न सकिन्छ। मनुष्य शरिरको प्रत्येक कोषमा यस्ता क्रोमोजोमको सङख्या सदा सर्बदा ४६ मात्र हुन्छ। ति मद्ये २३ वटा आमा तर्फका र २३ वटा बावु तर्फका हुन्छ्न। यि ४६ वटा साना साना धागाको त्यान्द्रा जस्ता देखीने क्रोमोजोम २३ जोडी भएर बसेका हुन्छन। ति मध्ये एक जोडीमा छोरा वा छोरी भन्ने लिङग निर्धारनका वंशाणुहरु रहेका हुन्छन। XXXXXXX YYYYYY महिलाको क्रोमोजोम एकै प्रकृतिका हुन्छन, जस्लाई अंग्रेजीको X नामले बुझिन्छ। अर्थात स्त्री क्रोमोजोम जोडी XX हुन्छन। तर पुरुषको क्रोमोजोम जोडी दूई भिन्न प्रकृतिका हुन्छन। एउटा क्रोमोजोम नारीको जस्तै X र अर्को भने त्यसभन्दा सर्वथा भिन्न प्रकृतिको Y नामक क्रोमोजोम हुन्छ। अर्थात क्रोमोजोमको दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा प्रत्येक पुरुष अर्धनारीश्वर (आधा पुरुष आधा स्त्री) हुन् भने नारी चाहि नारी मात्र हुन्।
स्त्री वर्गमा डिम्ब बन्ने क्रममा अण्डाशयभित्र जीवकोष बिभाजन हुदाँ प्रत्येक कोषमा एउटा एउटा X क्रोमोजोम स्थापित हुन्छन। पुरुषका चाहिँ कुनै शुक्रकिट Y क्रोमोजोमधारी हुन्छन भने कुनै X क्रोमोजोमधारी हुन्छन। यदि पुरुषको X क्रोमोजोमधारी शुक्रकिट स्त्रीको डिम्बमा छिरेर गर्भधान भयो भने त्यस डिम्बमा दुवै XX क्रोमोजोम स्थापित हुन्छन। त्यसबाट छोरी जन्मिन्छे। तर पुरुष बिर्यबाट X को सट्टामा Y क्रोमोजोम स्त्रीको डिम्बमा छिरेर गर्भधान भयो भने क्रोमोजोमको स्वरुप YY हुन्छ र त्यसबाट छोरा जन्मिन्छ।
गर्भधान गर्न योग्य अवस्थामा मानव गर्भासय भित्र केवल एक डिम्बमात्र तयार भइ बसेको हुन्छ। पुरुष सम्भोगबाट त्याहा करडौको सङख्यामा शुक्रकिट पुगेको हुन्छन्। ति स्याउ स्याउति शुक्रकिट मध्ये समान्यतय ५० प्रतिशत Y क्रोमोजोमधारी र ५० प्रतिशत X क्रोमोजोमधारी हुन्छन। गर्भधानको प्रतिस्पर्धा र होडबाजीमा Y क्रोमोजोमले भेटे छोरा र X क्रोमोजोमले भेटे छोरी जन्मन जान्छन।
स्त्री डिम्वसायको आन्तरिक वातावरण र दम्पतिका आफ्नै घर आगँन , खानपिन र मनोवैज्ञानिक अवस्थाले पनि शुक्रकिटको चलखेलमा प्रभाव पार्न सक्ने हुन्छ। तसर्थ खानपिन हावापानी सामाजिक वातावरणको फेरबदलले पनि गर्भधानमा प्रभाव पार्ने कुरा हाम्रा परम्परागत रितिरिवाजमा चलेको बर्त – उपवास बस्ने तिर्थयात्रामा जाने आदिँ क्रियाकलापले दर्शाउछन्। पुत्र लाभ या पुत्री लाभको लागी यि बिकल्पहरुलाई छोडेर पुरुषहरु अर्क विवाह तर्फ तम्सनु युत्तिसङगत हुदैन्। किनभने आफ्नै विर्यमा Y क्रोमोजोमधारी शुक्रकिटले गर्भधान गर्ने क्षमता नभएसम्म छोरी नै जन्मिन्छे। छोरा वा छोरीको टुङगो लगाउने क्षमता स्त्रीलाई त प्रकृतिले दिएकै छैन्। तसर्थ अर्को पत्नी खोज्नु उपचारको बाटो नभई समस्याको खाडल बन्न सक्छ।
तालुखुईलेहरुलाई खुसीको खबर
अमेरिकी वैज्ञानिकहरुले शरीरका विभिन्न भागमा रौं उमार्न सकिने प्रविधि विकसित गरेका छन् । युनिभर्सिटी अफ पेन्सिल्भिनियाका वैज्ञानिकहरुले यस प्रकारको रौं मुसामा विकस गरेका हुन् । उनीहरुले मुसामा एक प्रकारको स्टेम सेल विकसित गरे । मुसामा भएको घाउको उपचार गर्ने क्रममा यो कुरा पत्ता लागेको हो । उक्त घाउमा सजिलैसँग रौं विकसित भए । यसै गरी मानिसमा पनि रौं विकास गर्न सकिने दाबी सम्भव हुने कुरा पनि उनीहरुले बताएका छन् । यसो भए खास गरी तालुखुईलेहरु लाभान्वित हुनेछन् ।
जीवनको नयाँ अध्याय प्रारम्भ गर्ने क्रममा हरेक नवदुलहीले केही सपना, अपेक्षा तथा इच्छाहरू राखेका हुन्छन् । तिनले वास्तविक रूप पाए उनका लागि त्यो भन्दा ठूलो खुसी अरू केही हुँदैन । उनका यी इच्छाहरू उनको जीवनसाथी एवं परिवारसित जोडिएका हुन्छन् जहाँ उनले आफ्नो जीवनको बाँकी अंश बिताउँछिन् ।
आफ्नो सुहागरातका सम्बन्धमा पुरुषजत्तिकै महिलाहरू पनि उत्साहित हुन्छन् । यद्यपि पुरुषले यसमा पहल गरून् भन्ने चाहना उनीहरूको हुन्छ ।
सुहागरातमा 'जसलाई मैले खोजिरहेको थिएँ, तिमी त्यही व्यक्ति हौ । आज तिमीलाई पाएर मेरो सपना साकार भयो ।' भन्ने अभिव्यक्तिबाट उनमा खुसीको लहर पैदा हुन्छ । श्रीमान्बाट यी कुराहरू सुन्ने चाहना हरेक नव दुलहीमा हुन्छ । श्रीमान्ले आफ्नो रूप-सौन्दर्यका बारेमा प्रशंसा गरून् । आफ्नो अँगालोमा बाँधेर प्रेममय जीवनको प्रारम्भमा कुनै प्रेमपूर्ण उपहार भेट गरून् । यी सब कल्पना नवदुलहीले आफ्नो विवाहका बारेमा साँचेर राखेकी हुन्छिन् ।
श्रीमान्को हरेक आवश्यकतालाई पूरा गर्न तयार हुने दुलहीको मनमा श्रीमान्बाट पनि आफ्ना लागि प्रेम-सम्मान, आत्मीयता प्राप्त होस् भन्ने हुन्छ ।
आफूले श्रीमान् एवं परविारजनको सम्मान र आदर गरेजस्तो श्रीमान् तथा उनको परविारजनबाट पनि आफ्नो माइती पक्षको आदर-सम्मान होस् भन्ने चाहना दुलहीको हुन्छ ।
श्रीमान्को घरपरविारमा त्यहाँको रीतिरविाज एवं संस्कारका बारेमा जानकारी नभएर आफूबाट कुनै गल्ती भएको स्थितिमा त्यतिबेला उनी कोही त्यस्तो व्यक्तिको सहयोगको अपेक्षा राख्छिन् जसले उनलाई त्यहाँको रीतिरविाजका बारेमा जानकारी दिनुका साथै भूलवश भएको गल्तीका लागि क्षमा पनि दिलाओस् ।
श्रीमान्को घरमा जेठाजुलाई आफ्नो दाइ, देवरलाई भाइ, दिदीलाई आफ्नी दिदी र नन्दलाई आफ्नी बहिनी र संगिनीसरह सम्बन्ध राख्ने चाहना नवदुलहीको हुन्छ ।
सासूलाई आमासरहको स्थान दिएपछि उनीबाट पनि आफूलाई छोरीसरह व्यवहार होस् भन्ने चाहना नवदुलहीको हुन्छ ।
घरमा आएका पाहुना, घरका अन्य सदस्य वा आफन्तसित परचिय गर्ने इच्छा नवदुलहीको हुन्छ ।
घरको कामकाजमा तिमीलाई यस्तो गर्न आउँदैन, तिमीले गरेको मिलेन, तिमीलाई सिकाएको छैन ? भन्नुको साटो आफू अर्काे परविारबाट आएकी हुनाले आफूलाई नयाँ वातावरण बुझ्न, त्यहाँको काम गर्ने शैलीका सम्बन्धमा जान्न समय प्रदान गरयिोस् भन्ने अपेक्षा नवदुलहीको हुन्छ । यी कुरालाई बुझेर श्रीमान्को परविारले उनीप्रति सकारात्मक व्यवहार गर्नुपर्छ ।
परविारमा केही असमझदारी वा सानो विवाद भए त्यसलाई तत्काल समाधान गर्नँपर्छ । यसलाई तेस्रो व्यक्तिसित कुराकानीको विषय बनाएर बुहारीको बेइज्जत गर्नुहुँदैन ।
घरपरविारको गोप्य कुरा पनि उनलाई आफ्नै सदस्य मानेर बताउनुपर्छ ।
आफ्ना श्रीमान्ले आफ्नो जन्मदिन, म्यारजि एनिवर्सरीलगायत अरू कुरालाई सम्झना गरून् र त्यससित सम्बन्धित सरप्राइज पनि दिऊन् भन्ने उनको इच्छा हुन्छ ।
समय मिलाएर चलचित्र देखाउन, छुट्टी मनाउन, घुमाउन लैजाऊन् भन्ने चाहना नवदुलहीमा हुन्छ ।
माइती जानबाट रोकतोक नगरयिोस्, समय-समयमा आफ्ना आमाबुवा र आफन्तजनसित समय बिताउन दिइयोस् भन्ने उनको अपेक्षा हुन्छ ।
आफ्ना बारेमा बुझ्न श्रीमान्ले दिनमा कमसेकम एकपटक भए पनि फोन गरून् भन्ने उनी चाहन्छिन् ।
दाइजोको सम्बन्धमा विवाद नगरयिोस् ।
घरका साना-ठूला हरेक समारोहमा आफूलाई सामेल गराइयोस् ।
आफन्तहरूसित उनका बारेमा गुनासो नगरयिोस् ।
आफ्नो योग्यता र दक्षताअनुसार काम गर्ने इच्छा राखे श्रीमान् एवं परविारबाट रोकतोक नहोस्, यसमा उनको साथ र प्रोत्साहन प्राप्त होस् ।
आफ्ना मित्रजनसित घुमफिर गर्न, घरमा बोलाउन रोकटोक नगरयिोस् ।
आफूले बनाएको खाना मीठो मानेर खाइयोस्, केही नयाँ परकिार तयार गरएिको छ भने त्यसलाई थोरै भए पनि चाखियोस् ।
श्रीमान्बाट सरप्राइज गिफ्टको आशा उनमा सधै हुन्छ । स-साना इच्छामा पनि श्रीमान्बाट साथ पाउने कुरामा उनी आशावादी हुन्छिन् ।
बिरामी भएको अवस्थामा आफ्नो हेरविचार राम्रोसँग गरयिोस् भन्ने अपेक्षा उनको हुन्छ ।
आफूले बनाएको खाना परविारको स्वादअनुसार नभए केही दिन नन्द वा सासूले आफूलाई त्यस विषयमा जानकारी दिइयोस्, राम्रोसँग सिकाइयोस् ।
आफ्नो रुचिअनुसार काम गर्न, तिनलाई पूरा गर्न सहयोग एवं प्रोत्साहन प्राप्त होस् ।
घरको कामकाजपछि आफ्नो इच्छाअनुसार काम गर्न वा आराम गर्न रोकटोक नहोस् ।
परम्परावादी सोच अँगालेर कडा अनुशासनमा राख्ने काम नगरयिोस् । विशेषगरी लवाइखवाइका मामिलामा वा कतै जाने सम्बन्धमा, आफ्नो स्वतन्त्र जीवनको अधिकारमा बन्देज र नियन्त्रण नगरयिोस् ।
श्रीिमान्-श्रीमतीको विवाद र झगडामा छोराको साथ दिएर बुहारीलाई एक्लो बनाउने, छोराको गल्ती लुकाउने, तथा बुहारीलाई गलत साबित गर्ने काम नगरयिोस् । श्रीमान्-श्रीमतीको झगडामा समझदारीपूर्वक दुवैलाई शान्त पारी झगडा मिलाउनुकासाथै छोराको गल्तीमा उसलाई सम्झाइयोस् ।
प्रेम र विश्वासका आधारमा जीवनभर अघि बढ्ने वाचा गरी आफूले श्रीमान्लाई मन, बचन एवं कर्मले साथ दिइएको हुन्छ, श्रीमान्बाट पनि सधै त्यस्तै किसिमको व्यवहार होस् भन्ने इच्छा नवदुलहीमा हुन्छ ।
डर पहिलो रात्रिको
विवाहपछिको पहिलो प्रणय रात्रि अर्थात् सुहागरातका सम्बन्धमा नवविवाहित जोडीलाई जति रोमाञ्चक अनुभूति हुन्छ त्यति नै डर पनि हुन्छ । प्रथम प्रणय रात्रिका सम्बन्धमा महिलालाई मात्र नभएर पुरुषको मनमा पनि डर तथा अन्यौल हुन्छ ।
महिलालाई महसुस हुने डर
सामाजिक कारणः हाम्रो सामाजिक परििस्थति र मान्यताअनुसार यौनलाई वर्जित कुराका रूपमा लिइएको पाइन्छ । विवाहपछिको क्रियाका रूपमा लिइने र वंश वृद्धिको माध्यममा सीमित राखिएकाले अहिलेको आधुनिक सामाजिक दायरामा पनि कतिपय युवती विवाहयोग्य हुँदाको उमेरसम्म पनि यसको जानकारीबाट वञ्चित देखिन्छन् । यही कारणले उनीहरू यौनप्रतिको रुचि र उत्सुकताबाट टाढा छन् । उनीहरूमा यसप्रतिको डर तथा अन्यौल पनि हुन्छ ।
समाधान ः एक निश्चित उमेरपछि यौनका बारेमा जानकारी राख्नु आवश्यक हुन्छ । विवाह तय भैसकेपछि यौन सम्बन्धका बारेमा मनमा कुनै प्रकारको शंका वा भय रहे आफ्ना विवाहित मित्रहरू वा आमा, भाउजू अथवा यौन-विशेषज्ञबाट सही जानकारी हासिल गरी शंका र जिज्ञासा हटाउनु आवश्यक छ ।
हाम्रो समाजमा करबि ९० प्रतिशत विवाह परिवारको सहमतिमा हुन्छ । जसमा विवाहित दम्पती एक-अर्काका बारेमा अपरिचित हुन्छन् । प्रारम्भिक समयमा दम्पतीबीच भावनात्मक लगाव हुँदैन । यस स्थितिमा अधिकांश महिला यौन सम्बन्धका लागि तयार हुँदैनन् । परण्िाामस्वरूप सुरुका दिनमा यौनसम्पर्कका समयमा उनीहरू उत्तेजित हुँदैनन् । यसका अतिरत्तिm कतिपय महिलामा यौनका सम्बन्धमा अनेक भ्रान्ति हुन्छन् । अधिकांश महिलामा प्रथम सहवासका समयमा पीडा तथा ब्लिडिङको भय रहन्छ । साथै तिनमा गर्भधारणको पनि डर हुन्छ ।
समाधान ः विवाहका विभिन्न विधि पूरा गर्ने क्रममा नवदम्पती त्यसै पनि शारीरकि रूपले थकित हुन्छन् । अतः यौनका लागि हतार गर्नुहुँदैन । सबैभन्दा पहिले एक-अर्कालाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ । भावनात्मक लगावका लागि अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र एक-अर्काको इच्छा बुझेर यौन-सम्बन्धतर्फ अग्रसर हुनु उचित हुन्छ । यो प्रसंगमा प्रतीक्षाको फल मीठो हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु राम्रो हुन्छ ।
अधिकांश महिलाको मनमा पेनिट्रेसन अर्थात् लिङ्गको प्रवेशलाई लिएर भय हुन्छ । यही कारणले गर्दा महिलाहरू सहवासमा सहयोग गर्न हिच्किचाउँछन् । यसबाट पुरुषलाई पेनिट्रेसन गर्न असजिलो हुन्छ । यो डर आफन्तजन वा मित्रले ख्याल-ख्यालमा भनेको कुराका कारण पनि उत्पन्न हुन्छ । कतिपय अवस्थामा कुनै युवतीमाथि घटेका कुनै घटनाको समाचार वा त्यस्तै कुनै कुराले पनि असर पारेको हुन्छ ।
समाधान ः मनबाट भय हटाउने प्रयासपछि पनि समस्या समाधान नभए मनोचिकित्सकहरूसँग सल्लाह लिनु उपयुक्त हुन्छ ।
सफल र सुखद् यौन-सम्बन्धका लागि महिला उत्तेजित हुनु आवश्यक छ । महिला उत्तेजित नभएको अवस्थामा उनका लागि सहवास अत्यन्त पीडादायी हुन पुग्छ । उत्तेजित नहुनुका पछाडि हार्मोनल वा बायोकेमिकल कारण पनि हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा आत्मविश्वासको कमीले पनि यस्तो हुन्छ । यसका अतिरत्तिm यदि महिला आफ्नो श्रीमान्सँग भावनात्मक रूपले जोडिएकी छैनन् भने पनि उनलाई उत्तेजित हुन समय लाग्छ ।
समाधान ः श्रीमान्सँग नजिकिने प्रयास गर्नुपर्छ । फोरप्लेको समय बढाउनुपर्छ । भावनात्मक रूपले नजिकिने प्रयास गरे सबै समस्या समाधान हुन्छ ।
सहवासका बेला पीडा
कतिपय सहवासमा भय नभए पनि महिलाहरूलाई पीडा हुन्छ । त्यसैले उनीहरू डराउँछन् । पटक-पटक पीडा भए उनीहरूको मनमा सधैंका लागि डर बस्छ । यसका अन्य कारण पनि हुनसक्छन्, जस्तै- पेल्बिक मसल्स टाइट हुनु, हाइमेन मोटो हुनु, हार्माेन्सको असन्तुलन, योनिमा चिप्लोपनको कमी, इन्फेक्सन आदि ।
समाधानः पीडाको कारण थाहा नभएसम्म सहवास गर्नुहुँदैन, अन्यथा स्थिति बिग्रन सक्छ । पहिले आफ्नी नव विवाहिता श्रीमतिसँग कुरा गरेर पीडाको कारण जान्ने प्रयास गर्नुपर्छ । सम्बन्धित चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ । सहवासका बेला योनिमा चिल्लोपनका लागि जेली प्रयोग गर्न सकिन्छ । मोटो हाइमेनको समस्यालाई एक साधारण अप्रेसनबाट ठीक गर्न सकिन्छ । हार्मोन्सको असन्तुलन ठीक गर्न चिकित्सकको सल्लाहअनुसार उपचार गराउनुपर्छ ।
पुरुषलाई महसुस हुने भय
परफर्मेन्सको भय ः यौनसम्पर्क असफल हुने एवं आफ्नी श्रीमतीलाई सन्तुष्ट गर्न नसकिने हो कि भन्ने डरले पुरुषलाई रल्ियाक्स हुन गाह्रो हुन्छ । यही कारणले गर्दा यौनसम्पर्क सफल हुन पाउँदैन । फलस्वरूप मनमा निराशा जन्मन्छ । कयौं पटक यो भावना यतिसम्म बढ्छ कि पुरुष स्वयं आफूलाई नपुंसक सम्झन थाल्छ ।
समाधानः परफर्मेन्सको चिन्तालाई छाडेर सहवासबाट प्राप्त हुने आनन्दलाई महसुस गर्नुपर्छ र सामान्य रहने प्रयास गर्नुपर्छ ।
इरेक्सन नहुने डर
सफल सहवासका लागि इरेक्सन अर्थात् पुरुष लिङ्ग उत्तेजित हुनु आवश्यक छ । यदि पुरुष यो कुरामा असफल भए उसको आत्मविश्वास डगमगाउँछ ।
समाधान ः केही क्षणका लागि इरेक्सनको कुरा बिर्सिएर फोरप्लेको आनन्द लिनुपर्छ । मन्द प्रकाश, हल्का संगीत, हल्का खालको पर्फ्युमको सुगन्धमा प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसपछि पनि सफलता प्राप्त नभए सेक्सोलोजिस्टसँग सम्पर्क गर्नु उचित हुन्छ ।
जब पुरुष यौन सन्तुष्टि प्राप्त नगरी इजाक्युलेट अर्थात् स्खलित भए त्यसलाई पि्र-मेच्योर इजाक्युलेसन भनिन्छ । यदि दुई-चार पटक यस प्रकारको स्थिति सामना गर्नुपरे लज्जा महसुस हुन्छ र भयका कारण मनमा निराशा तथा तनावले ठाउँ बनाउँछ अनि त्यसपछि हरेकपटक यो स्थिति दोहोरिन्छ ।
समाधान ः मनबाट डर हटाउने हरसम्भव प्रयास गर्नुपर्छ तर पनि परििस्थतिबाट उम्कन सकिएन भने सेक्सोलोजिस्टको सल्लाहअनुसार स्टार्ट स्टप मेथड वा स्किब्ज थेरापीको सहयोग लिनुपर्छ ।
वैवाहिक सम्बन्धका अनेक महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छन् । जसमध्ये दुई विपरीत लिङ्गी शरीरको समागम र त्यसपछि प्रजननद्वारा वंशवृद्धिको महत्त्व धेरै हुन्छ । यदि प्रजननको काम सन्तोष र आनन्दपूर्वक भए सन्तान पनि उत्तम हुन्छन् । यो कुरालाई शास्त्रले स्वीकार गरेको छ र यसमा आजको चिकित्सा पद्धतिले पनि सहमति जनाएको छ । अपहेलना, बेमन र तनाव तथा आवेगका बीच भएको समागमले न माता-पितालाई न त जन्मने सन्तानलाई नै राम्रो गर्छ । अतः वैवाहिक जीवनमा यौनको भूमिका, यसको महत्त्व र आवश्यकतालाई अवमूल्यन गर्नुहुँदैन ।
उत्साह, यौनजीवन र वातावरण
कतिपय पुरुष समागमका लागि हर समय उत्सुक हुन्छन् तर महिला भने कुनै न कुनै रूपमा नाइँ भन्न बाध्य हुन्छिन् । त्यसैले सामान्य मनस्थिति भएकी महिला नियमित रूपमा सहवासका लागि तयार नहुने स्थिति बढी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा मानसिक, शारीरकि, भावनात्मक र सामाजिक तथा पारविारकि पक्ष पनि यसको कारकतत्त्व हुन्छ । जीवनमा समस्याहरूको सामना कुनै न कुनै रूपमा गररिहनुपर्ने हुन्छ अतः त्यसबाट विचलित भएर नाइँ भन्नुहुँदैन । तीमध्ये कसैको मृत्यु हुनु वा उपयुक्त वातावरण नभएको स्थितिमा नाइँ भन्नु उचित हुन्छ । यौन र वातावरणको अटुट सम्बन्ध हुन्छ । घरमा सबै परविारजनको उपस्थिति भएको बेला, केटाकेटीको होहल्ला भएको अवस्थामा, सुखद् वातावरणको अनुभूति नभएको बेला, एकान्त गुम्ने डर भएको स्थितिमा, कोठाभित्रको आवाज बाहिर सुनिन सक्ने स्थितिमा, कुनै न कुनै बेला कसै न कसैले आफूलाई बोलाइरहने स्थितिमा श्रीमतीले सहवासका लागि नाइँ भने श्रीमान्लाई कुनै प्रकारको आपत्ति हुनुहुँदैन ।
केटाकेटी हुर्किसकेको अवस्थामा श्रीमान्-श्रीमतीबीचको अन्तरंग सम्बन्धमा तिनको अचानक उपस्थिति हुन सक्ने भयले पनि कतिपय अवस्थामा श्रीमतीले श्रीमान्को अनुरोध अस्वीकार गर्ने सम्भावना हुन्छ । शिशु दूध खाने अवस्थामै छ भने श्रीमतीले आफ्नो सन्तानलाई नै महत्त्व दिन्छिन् । त्यसबेला पुरुष अधैर्य बने यसले सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । आमाका लागि सन्तान प्राथमिकता हुने भएकाले पुरुषले राम्रोसँग बुझ्नु आवश्यक छ । अर्कातर्फ श्रीमान्को चाहनालाई वास्ता नगर्नु पनि बेइमानी हुन्छ । अतः श्रीमान्-श्रीमती दुवैले आपसी समझदारी कायम राख्नु आवश्यक छ ।
शारीरकि अस्वस्थतामा जबर्जस्ती सहवास गर्नुहुँदैन । अतः त्यसबेला श्रीमान्बाट धैर्यको अपेक्षा गरनिु स्वभाविक हुन्छ । श्रीमतीले पनि समझदारी अपनाउनुुपर्छ । सहवासका लागि गरएिको अनुरोधलाई लत्याएर श्रीमान्लाई सजायँ दिनु पनि समस्याको अर्को पाटो हो । शरीर वा सहवासको माध्यमबाट श्रीमान्सँग बितेका दिनमा श्रीमान्द्वारा गरएिको अन्यायको बदला लिनु महिला सुलभ मानसिकता हो । यस विषयमा श्रीमान्ले सावधानी अपनाउनुपर्छ । स-साना कुरामा श्रीमतीलाई होच्याउने वा उनीमाथि अन्याय गर्ने कुरालाई यदि श्रीमान्ले आफ्नो अधिकार मान्छन् भने सहवासका लागि नाइँ भन्नुलाई पनि श्रीमतीको अधिकार मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा सहवास बलात्कारसरह हुन्छ ।
श्रीमतीलाई जे कुरा मनपर्दैन त्यसका लागि उनले रसिाएर नाइँ भन्न सक्छिन् । उनको आफ्नै व्यक्तित्व हुन्छ । जब उनले त्यसमाथि प्रहार भैरहेको महसुस गर्छिन् तब उनमा आवेगले जन्म लिन्छ । कहिलेकाहीँ सधै सहयोग र साथ दिने श्रीमतीले पनि नाइँ भन्न सक्छिन् । त्यस्तो स्थितिमा कारण पत्ता लगाउनुपर्छ । त्यसबेला प्रेमको सहाराबाट उक्त कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ र पुनः श्रीमतीको साथ र सहयोग पाउन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा श्रीमती स्वयं पनि भ्रमित हुन्छिन् । सहवासका विषयमा उनी किन उत्साहित छैनन् ? उनी आफूलाई पनि त्यस विषयमा जानकारी नहुन सक्छ । मनोचिकित्सकहरूका अनुसार यसका पछाडि उनको लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा आदि कारण हुनसक्छन् ।
यौनका विषयमा दिइएको भ्रामक शिक्षाका कारण उनले त्यसलाई लज्जास्पद र नराम्रो कुराका रूपमा लिएको हुनसक्छ । सहवासलाई आफ्नो अस्तित्वको हरणका रूपमा बुझिएको हुनसक्छ वा श्रीमान्को आफूमाथि अनावश्यक आधिपत्यका रूपमा ग्रहण गरएिको हुनसक्छ । आफ्नो शरीरको संरचना र सुन्दरताप्रति कुण्ठित भएको हुनसक्छ वा किशोरावस्थामा कुनै काल्पनिक पुरुषको छवि बनाएको र त्यो वास्तविकता हुन नसकेकाले दुःखी भएर त्यस रूपमा प्रतिक्रिया आएको हुनसक्छ । यी सबै कारणले सहवासप्रति नाइँको प्रतिक्रियालाई श्रीमान्ले आफ्नो अपमान भएको नसोंचेर श्रीमतीलाई एक असल मित्रका रूपमा सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।
श्रीमतीलाई सही रूपमा बुझेर उनको समस्या समाधान गर्न हरसम्भव सहयोग गर्नुपर्छ । स्थिति गम्भीर भए सम्बन्धित विशेषज्ञको परामर्श लिनु राम्रो हुन्छ तथापि समायोजन सबैभन्दा बलियो अस्त्र हो जसको आधार हुन्छ प्रेम, आत्मीयता, सहयोग, समझदारी र विश्वास ।
कम्प्युटर जगतमा देखिएको प्रथम भाइरस
सन् १९८६ मा कम्प्युटर जगतमा प्रथम पटक भाइरस देखा परेको थियो । दिमाग अथवा ब्रेन नामाकरण गरिएको उक्त कम्प्युटर भाइरसले फ्लपी डिस्क मार्फत आफ्नो आक्रामक यात्रा तय गर्ने भएकोले त्यतिबेला उक्त भाइरसले जति तहल्का मच्चाएको थियो त्यति मात्रामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन भने असफल भएका थिए । बुट सेक्टर भाइरस भएकैले प्रभावित फ्लपि डिस्कमा लुकेर बस्ने र उक्त डिस्क अर्को कुनै पनि नयाँ कम्प्युटरमा राख्दा पनि त्यसले तत्कालै आफ्नो उपस्थिति जनाउने गर्दथ्यो । हाल लुप्त भैसकेको यो भाइरस पहिलो कम्प्युटर भइरस भएर पनि अहिलेका कम्प्युटर भाइरस जस्ता अति नै हानिकारक तथा विकार सिर्जना गर्ने खालको भने थिएन ।
सन् १९८६, जनवरीमा पहिलो पटक देखा परेको यो भाइरस पाकिस्तानको एउटा सफ्टवेयरको सुरक्षाको लागि निर्माण गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएता पनि अझै सम्म यसको उद्‌गम स्थलको बारेमा पूर्ण रुपले स्पष्ट हुन सकिएको छैन । सन् १९८४ मा अमेरिकी कम्प्युटर वैज्ञानिक फ्रेड कोहेन ले कम्प्युटरलाई गलत आदेश दिन सक्षम तत्वलाई कम्पुटर भाइरस नामाकरण गरेका थिए । यसको २ वर्ष नबित्दै सन् १९८६ मा यस ब्रेन भाइरसको निर्माण भएको थियो ।
इन्टरनेटको विकाससँगै हालसम्म यस्ता विभिन्न भाइरसहरुले आफ्नो गति अति नै तिब्र बनाएका छन् र आफ्नो प्रभावलाई शक्तिशाली तुल्याइएका छन् । जसका कारण भर्खरै चलाउँदै गरेको कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम नै पुन:प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने गरी आफ्नो हानीकारक प्रभाव देखाउन पछि परेका छैनन् ।